Xiaomi Mi Mix Fold vs Galaxy Z Fold 2 |. Gam akporosis
Ozugbo Xiaomi gosipụtara atụmatụ ya maka ekwentị mpịachi, iwu ji anyị ịme a nyocha n'etiti Xiaomi Mi Mix Fold na Galaxy Z Fold 2, ihe kachasị na-adịbeghị anya nke mpịachi ama nke ụlọ ọrụ Korea na nke Xiaomi na-a drinksụ.
Samsung (Fold Galaxy) na Huawei (Mate X) gosipụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu oge ahụ na mbido 2019, otu ụbọchị iche, ndị mbụ smartphones see ahịa, n'agbanyeghị na ihe nlereanya nke Huawei, o mechara hapụ China. Agbanyeghị na katọrọ usoro Samsung (akwụkwọ-n'ụdị) ma too Huawei, na njedebe Samsung ziri ezi ma duga ụzọ. Ọgbọ nke abụọ nke Galaxy Fold, Mepee Galaxy Z ẹkenam ke August 2020.
Na mgbe m kwuru na ọ bụ eziokwu, ọ bụ n'ihi na ezigbo na mpịachi ama bụ na ọ na-apịaji n'ime, dị ka a akwụkwọ, ya bụ, na lA na-echekwa ihu igwe mpịachi n'oge niile, ọ bụghị dị ka Mate X nke ihuenyo ya gbara gburugburu mpụta nke ngwaọrụ ahụ na mgbe a na-apịaji, otu n'ime ihu ghọrọ ihuenyo mpụga.
Samsung, mgbe ị na-eji akwụkwọ yiri akwụkwọ, emejuputa ihuenyo n'èzí, ngosipụta nke onwe kpamkpam, nke nha nke ukwuu na ọgbọ nke abụọ ebidoro n'afọ gara aga.
Na mgbe m kwuru na Samsung ziri ezi, m na-ekwukwa ya, n'ihi na afọ ole na ole gara aga, ụlọ ọrụ Xiaomi gwa video nke ị nwere ike ịhụ a ama na mpịachi ihuenyo Site na imewe yiri Huawei's Mate X, agbanyeghị, mgbe ekpughere ekwentị a, ọ na-eji otu ụdị akwụkwọ ahụ dị ka Galaxy Z Fold.
1.4 Akụkụ na ibu ibu
1.6 Ndị kamera
1.7 Ịme ihe
1.9 Ọnụahịa na nnweta
Dịka m kwuru n'elu, Xiaomi Mi Mix Fold na-eji otu ihe ahụ Samsung Fold Samsung (Ọbụna ha depụtaghachila foto nkwado ahụ), a imewe na-emechi n'ime iji chebe mpịachi ihuenyo na incorporates a na ihuenyo na otu akụkụ nke anyị nwere ike isi na-eme na ama mgbe niile na-enweghị na-emeghe ya nọgidere.
N'okwu abụọ ahụ, mpụta ihu dị oke warara dị ka inwe ike ịnụ ụtọ fim ma ọ bụ ọdịnaya ọtụtụ ọdịnaya. N'echiche a, ihuenyo Xiaomi pere mpe karịa, yabụ ọ bụrụ na ị tụrụ anya mgbanwe na nke a, ịgaghị ahụ ya na Xiaomi.
Ọzọ dị iche iche, anyị na-ahụ ya na ntanetị dị n'ime. Mgbe ume ọnụego nke Xiaomi ihuenyo ime, ụdị AMOLED bụ 60 Hz, ọ ruru 90 Hz na ihuenyo mpụta.
Na Galaxy Fold 2 ọ bụ onye na-abụghị, ebe ọ bụ na mpụga ihuenyo esịmde 120 Hz, bụ ụdị AMOLED na ihuenyo mpụga atọrọ na 60 Hz dị ka ọnụego ume ọhụrụ.
Ihuenyo ime nke Mi Mix Fold bụ 8,01 sentimita asatọ site na 7,5 sentimita asatọ nke Samsung nlereanya. Ihuenyo mpụga, na ụdị nke Xiaomi, bụ 6,52 sentimita site na 6,2 sentimita asatọ nke Agbo 2.
E gosipụtara Galaxy Fold 2 na August 2020 ebe Mi Mix Fold gosipụtara na Machị 2021 (ọnwa asaa ka e mesịrị). Oge a dị iche enyela ụlọ ọrụ Korea ohere Deploy Qualcomm Kachasị Ike Nhazi Taa, Snapdragon 888 tinyere nhọrọ nchekwa dị iche iche RAM dị ka ebe nchekwa.
The Galaxy Z Fold 2, na-achịkwa ya Qualcomm's Snapdragon 865 + nwere 256GB nchekwa na 12GB nke RAM. Samsung na-enye naanị otu ụdị ngwaọrụ a, ebe Xiaomi dị na China na-enye ụdị nsụgharị 3 dị iche iche nke RAM na nchekwa.
Modelsdị abụọ ahụ dị dakọtara na netwọk 5G, ha na-etinye Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 na NFC. A na-enye nchebe site na a akara mkpisiaka ihe mmetụta dị na otu nke n'akụkụ nke ngwaọrụ.
Ọ bụrụ na ndị nke a mpịachi telefon na-ama buru ibu, Iadị Xiaomi emebeghị ka ọ dị mma, dịka ọ bụghị naanị na ọ sara mbara, kamakwa ọ dị arọ karịa.
Mepee Galaxy Z X x 159.2 68 16.8 mm X x 159.2 128.2 6.9 mm 282 grams
Xiaomi Mi Mix Fold X x 173.27 69.8 17.2 mm X x 173.27 133.38 7.62 mm 317 grams
El My Max Fold na-etinye batrị 5.020 mAh na ọ na-akwado ngwa ngwa odori ruo 67W. Nkechiamsung choro batrị 4.500 mAh dakọtara na ngwa ngwa ịkwụ ụgwọ ruo 45W.
Xiaomi kwadoro igwefoto nke Mi Mix Fold na a Anya 108 MP, oghere telephoto nke 8 MP na mbugharị anya anya 3x, oghere 13 MP sara mbara yana ihe mmetụta sensọ 8 MP. Ọ nwere ike ịdekọ vidiyo na mma 8K.
Anya m niile nke Samsung Z Fold 2 nyere dị 12 MP (oghere buru ibu, mbara elu na mbara igwe sara mbara) ma ghara ikwe ka ịdekọ vidiyo na 8K. O doro anya na mmelite niile nke Galaxy s21 ultra A ga-etinye ha n'ọrụ na Galaxy Z Fold 3 nke ụlọ ọrụ Korea na-enye n'etiti afọ a.
Mgbe anyị meghere mpịakọta Mi Mix, ọ tụrụ anyị n’anya agaghị achọta igwefoto selfie, ya mere ihu dum bụ ihuenyo, na-enweghị ihe nlele ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ime onwe anyị, anyị ga-eji ekwentị mpịachi ya na ihe mmetụta 20 MP ya mee ya.
Samsung na-enye anyị igwefoto dị n'ime, yabụ anyị nwere ike jiri ekwentị mepere emepe maka nzukọ vidiyo, igwefoto anyị hụrụ na akuku aka ekpe nke ihuenyo na ihe na-enyere ndị ọrụ mgbabere uzo nke na-enye anyị ohere idobe Fold ọkara imeghe ka ọ bụrụ na ebe dị larịị.
Ma emepụta na-enye nnọọ oru oma multitasking ngwọta na ekwentị mkpanaaka, ọ bụ ezie na n'ihe banyere Xiaomi ejiri gam akporo 10 jikwaa ama mgbe enwere Galaxy Z Fold 2 ka emelitere ya na gam akporo 11.
Ihe ngwọta na-adọrọ mmasị nke Xiaomi na-enye anyị bụ ohere gbanwee ama ama na desktọọpụ, ọ bụ ezie na na obere ihuenyo dị otú ahụ, enwere m obi abụọ na ị nwere ike nweta ọtụtụ n'ime ya.
N'echiche a, Samsung na-enye anyị DeX, ihe ngwọta nke pNa-enye ohere ijikọ na ihuenyo buru ibu karịa na PC na Windows ma ọ bụ Samsung TV ma rụọ ọrụ ozugbo site na smartphone
Samsung na-enye naanị okwu abụọ, otu n'akụkụ ọ bụla nke smartphone, Otú ọ dị, Xiaomi emeela nnukwu ma tinye 4, abụọ n’akụkụ ọ bụla, yabụ mgbe ọ na-atọ ụtọ ihe nkiri, anyị ga-ahụ ụda dị elu dị na ụdị Xiaomi.
haman / kardon bụ ụlọ ọrụ na-akpata ụda ntọala, ụlọ ọrụ na- bụ nke Samsung 5 afọ gara aga.
Mostdị akụ na ụba kachasị dị na nso Xiaomi Mi Fold, 12 GB nke Ram na 256 GB nke nchekwa, ọ na-efu RMB 9.999, ihe dị ka 1.3000 euro Na mgbanwe. Nke anyị ga-atụkwasị ụtụ isi ma ọ bụrụ na e mechara ree ya na mpụga China, yabụ enwere ike ịtọ ọnụahịa na 1.500 ma ọ bụ 1.600 euro maka ụdị ahụ na 12 GB nke RAM na nchekwa 256 GB.
Versiondị ya na 12 GB nke Ram na 512 GB nke nchekwa Ọ na-efu 10.999 RMB, 1430 euro ịgbanwe, mgbe version na 16 GB nke Ram na 512 GB nke nchekwa guzo na RMB 12.999, 1.690 euro ịgbanwe.
Ruo taa, anyị nwere ike ịchọta Galaxy Z Fold 2 maka euro 1.200 na Amazon, Ọ dị mma n'okpuru euro 2.000 nke ego mmalite ya, karịa ọnụahịa na-adọrọ mmasị maka ihe ọ bụla ọ na-enye anyị.
N'oge a site na Xiaomi ha ekwuputaghi ụbọchị mwepụta nke Mi Mix Fold n'èzí china, ya mere o yikarịrị ka ọgbọ mbụ a agaghị ahapụ Eshia.
Xiaomi arụ ọrụ ozugbo mnsị na Galaxy Z Fold 2 ma melite ụfọdụ atụmatụ ndị, n'ihi nsogbu ohere, etinyeghị ya.
O yikarịrị ka ọ bụ, ọgbọ nke atọ nke foldable ama si Samsung sGbanwee ihe dị iche iche na igwefoto na ụda, isi abụọ ebe ụdị Xiaomi na-enweta mmeri n'ọtụtụ ebe.
Na Androidsis, anyị ekwuola ọtụtụ oge banyere asịrị na Samsung na-amụ etu esi democratize mpịachi smartphones, na o yikarịrị ka n'ime afọ a, hapụ a Lite version, na ọnụahịa dị ala karịa euro 2.000 nke bịara ọhụrụ Galaxy Fold 2 na-efu na ahịa.
Ugbu a, anyị nwere ike ịzụta ihe Galaxy Z Fold 2 maka euro 1.699 na weebụsaịtị Samsung ma ọ bụ gaa Amazon, ebe anyị nwere ike ịchọta ya site na ihe karịrị 1.200 euro, dịka m kwuru n'elu.
La ọgbọ nke atọ Galaxy Z Fold 3 O yikarịrị ka a ga-ewepụta ya n'etiti August, yabụ ọ bụrụ na ị bu n'obi ịzụta mpịachi ekwentị, ị nwere ike ichere ọnwa ole na ole iji nweta ọtụtụ uru na ya. Ọ bụ ezie na ọnụahịa nke Galaxy Z Fold 2, n'onwe m agaghị eche ọtụtụ ihe banyere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Xiaomi Mi Mix Fold vs Galaxy Z Fold 2